Ragu sidee u arkaan dumarka aan timaha hoose iska xiirin? | Raganimo University
Ragu sidee u arkaan dumarka aan timaha hoose iska xiirin?
March 4, 2019~1 minute
Hada ka hor naag Kenyan ah ayaa la seexatay nin ay ka baratay Facebook. Naagtaan waxay ahayd naag aan iska xiirin shuunka. Subaxii markii ay soo kacday ayay aragtay ninkii oo sariirta ka maqan iyo iyada oo aan shuun lahayn. Ninka ayaa subaxii inta uusan guriga ka bixin ayuu naagta guud ahaan shuunka ka xiiray. Markii la waydiiyay sababta uu u sameeyay arintaan ayuu warbaahinta u sheegay in uu doonayay in uu cashar u dhigo naagaha aan shuunka iska xiirin.
Raga Afikaanka arintu halkaas ayay ka joogtaa oo inta badan ma jecla naagaha aan shuunka iska xiirin. Laakiin saasoo ay tahay ragu isku aragti kama ahan. Waxaa jira ragga qaar jecel dumarka aan shuunka iska xiirin. Wadamada reer Galbeedka waxaa laga helaa rag xitaa jecel dumarka timaha badan ku leh kilkilaha.
Dumarku horta iyagu dhibaato ayay ku qabaan xiiritaanka shuunka balse haddii ninkaagu uu yahay mid aan u dulqaadan karin shuunka oo aad dooneyso in aad ku raaxaysataan galmada waxaa muhiim ah in aad ka fikirto xaaladiisa. Qaasatan haddii aad tahay gabadh jecel in hoos loo leefo, waxaa muhiim ah in aad ninkaaga u diyaariso meel nadiif oo uu ku raaxaysto.
Haddi aad hesho nin cajiib ah oo isagu ka mid ah kuwa tirada yar ee jecel dumarka timaha hoos ku leh, Hambalyo ayaan ku leenahay.